प्रचारप्रसारको अाज अन्तिम दिन, कुन शीर्ष नेता कहाँ ? – Himalaya TV
Home » समाचार » प्रचारप्रसारको अाज अन्तिम दिन, कुन शीर्ष नेता कहाँ ?
प्रचारप्रसारको अाज अन्तिम दिन, कुन शीर्ष नेता कहाँ ?
२८ बैशाख २०७४, बिहीबार ०८:३३
काठमाडौं, २८ बैशाख । निर्वाचन आयोगले आज राती १२ बजेपछि मौन अवधि सुरु हुने जनाएको छ र त्यसपछि उम्मेद्वारहरुले प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् ।
बिहीबार रातिबाट मौन अवधि सुरु, प्रचारप्रसारको अन्तिम दिन आज प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको व्यस्त तालिका यस्तो छ ।
नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पाँच दिन गृहजिल्ला गोरखाका चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएर काठमाडौं फर्केका छन् । बिहीबार उनले उपत्यकाका चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, स्थानीय चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा पनि जिल्ला दौडाहामा छन् । तीन दिनदेखि उनी गृहजिल्ला मकवानपुरमा खटिएका छन् । यो खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।